Anigu waxaan ahay wiil 17-sanno jir ah waxaana ku wareersanahay haddii aan isticmaali karo isla kandomka labbo jeer?
Maya, ma isticmaali kartid.
Haddii aad kandomka gelisid xubinka mar labaad, manidu waxay si kedis ah ugu soo baxaysaa dibada kandomka.
Kadibna manidu waxay geli kartaa xubinka taranka haweenayda.
Markaasi haweenaydu uur ayay qaadi kartaa.
Waxaynu kuu haynaa xoogaa nasteexooyin ah:
Kaliya isticmaal kandomyada aad kasoo saartid baakada xiran.
Ha isticmaalin kandomka haddii…
Baakadu ay dilaacsantahay ama furantahay.
Taariikhda dhicitaanka la dhaafay.
Ay khasab kugu tahay in aad markale hoos ugu soo jiidid kandomka dhinaca xubinka taranka.
Aan kandomku ula ekayn si sax ah xubinka taranka.
Markaasi waxaa khasa kugu ah in aad tuurtid kandomka.
Waxaad soo iibsan kartaa kandomyo baddan hal mar.
Kandomyada raqiiska ah waxaa lagu iibiyaa dukaamada daawooyinka lagu gado.
In lasoo iibsado kandomyadu waa arin caadi ah.
Waxaad muujinaysaa in aad qaadaysid mas’uuliyada.
Adigu uma baahnid in aad midaasi ka xishootid!